Uncategorized | Climb O'Clock
https://goo.gl/maps/GiZHU8YDHnP2 PUBLIC EVENT ACCESS is not only for Existed Climb O’Clock MEMBERS, but also to Everyone out there. YOU ALL are Cordially invited to our SOFT OPENING of the Climb O’Clock REBORN, the NEWEST Rock Climbing Venue in town … Continue reading →
Yangon Boulder Project Proposal 2014
Posted on August 2, 2016	by climberdoelone
Download links of the YET! UNSUCCESSFUL proposal onaBouldering Wall Project in Yangon University http://www.mediafire.com/download/yqnsdfd1tn3uf7v/YangonUniversity+Boulder+Wall+Proposal.pdf https://www.dropbox.com/s/w6vgq3ugbjz1xf0/YangonUniversity%20Boulder%20Wall%20Proposal.pdf?dl=0
Posted in Bouldering, Climbing, Myanmar, Proposal, Uncategorized, Yangon	| Leaveacomment
Big Waves of Myanmar Youth on Local Mountains Ranges
Posted on July 18, 2016	by climberdoelone
Nearly 600 Hikers ( which is not less than 587 members ) most of them are youths studying in Universities successfully made their footprints Continue reading →
Posted on July 4, 2016	by climberdoelone
ခါကာဘိုရာဇီတောင်တက်မှတ်တမ်း(၂၀၁၄ဂျပန်တောင်တက်အဖွဲ့) ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာတက်သွားတဲ့ ခါကာဘိုတောင်တက်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ထဲမှာ အမေရိကန်အဖွဲ့နဲ့ မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ သတင်း ဓာတ်ပုံ ဗီဒီယိုစတာတွေဟာ အင်တာနက်ပေါ်၊ဂျာနယ် မဂ္ဂဇင်းတွေနဲ့ တွေမှာ ရှာတွေ့နိုင်ပေမဲ့ ဂျပန်အဖွဲ့ရဲ့၂၀၁၄ခါကာဘိုဒေတာဟာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်။ ပြောရမယ်ဆို ခါကာဘိုတက်သွားသမျှတွေထဲမှာ ၂၀၁၄ဂျပန်teamဟာ လျှို့ဝှက်သည်းဖို့နဲ့ပဟေဠိအဆန်ဆုံးလို့တောင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ ရှားရှားပါးပါးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို ဂျာမဏီကတောင်တက်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကပေးပို့လို့ ကျွန်တော်ကံကောင်းစွာနဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ online ပေါ်ကိုအပိုင်း၃ပိုင်းခွဲပြီးတင်ထားပါတယ်၊ အပိုင်း၃ကတော့အရေးအကြီးဆုံးနဲ့အချက်အလက်တွေအများကြီးပါတဲ့အပိုင်းပါ။ (အပိုင်း၁-၂-၃ ရဲ့link တွေကိုယူပြီး facebook မှာကြည့်ရှူနိုင်ပါတယ်) အပိုင်း-၁ https://www.facebook.com/Razimedia/videos/668735439899604/ အပိုင်း-၂ https://www.facebook.com/Razimedia/videos/795099930596487/ အပိုင်း-၃ https://www.facebook.com/Razimedia/videos/852152304891249/ View this post on … Continue reading →
Posted in Climbing, Hkakaborazi, Uncategorized	| Leaveacomment
Posted on March 18, 2016	by climberdoelone
NCD ဆိုတာကနေသဘောပေါက်သလောက် ပြောရမယ်ဆိုရင် ဆီးချိုသွေးချို/ကင်ဆာ/နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ/ရင်ကျပ်ပန်းနာနဲ့ အာရုံကျောရောဂါတွေနဲ့ စိတ်ကျဝေဒနာစတဲ့ မကူးဆက်နိုင်တဲ့ရောဂါ Non-communicable diseases (NCDs) တွေ။ NCDဟာအခုကမ္ဘာသစ်ရဲ့အဓိကလူသတ်ကောင်၊သွေအေးလူသတ်သမား။ အရင်ခေတ်တုံးကတော့ လူသတ်ရောဂါဝေဒနာတွေဟာ ကူးဆက်ပြန့်ပွါးမြန်တဲ့ communicable diseases တွေ ပုလိပ်ရောဂါပိုးတို့ တီဘီရောဂါပိုးတို့တွေဟာ အခုခေတ်မှာတော့ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးတွေကော မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာပါထိထိရောက်ရောက်နဲ့ ဒီ တီဘီ စတဲ့ ကူးဆက်တတ်တဲ့ရောဂါတွေကို နိုင်ငံအဝှမ်းတားဆီးနိုင်နေပါပြီ။ တားဆီးရခက်တာက ဒီ(NCDs) တွေ။ ဆီးချို/ကင်ဆာ/နှလုံး/အာရုံကျောနဲ့ စိတ်ကျဝေဒနာ တွေ ဟာ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကန္ဋရဲ့အရှိုက်ကိုထိုးနှက်ဆုံးလို့ပြောရမယ်။ ဒီရောဂါတွေက ပြည်သူတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇအပြင် အခြားအရေးကြီးတဲ့ … Continue reading →
‪#‎ရိုးမမာရသွန်‬ ၁၇ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၅ မှာ ရန်ကုန် ရိုးမမာရသွန်ပွဲ ဝင်ပြီး ဆင်နွှဲလို့ရအောင် လေ့ကျင့်ရေးဇယားလေး လက်ဆောင်ပါးလိုက်ပါတယ် ။ တနင်္လာနေ့ တွေဟာ( အလုပ်/ရုံး/ကျောင်း စတက်တဲ့နေ့ ဖြစ်တဲ့ အားလျော်စွာ ) အေးအေးသက်သာ နားစေချင်ပါတယ်။ မနက်ဖြန် အင်္ဂါနေ့ မနက် သို့မဟုတ် မနက်ဖြန်ညနေ ရုံးဆင်း/ကျောင်းဆင်းချိန်မှာ ပွဲမဝင်ခင် အပြင်ကကျင်းပဆိုသလိုပဲ စပြီးလေ့ကျင့်ပါ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်မှ ကိုယ်ရမှာပါ။ ညှာပြီးလေ့ကျင့်ရင်တော့ အပြေးပွဲနေ့မှာ ကျန်ခဲ့မှာပါ။ (ပွဲအတွင်းမှာ လူအုပ်နဲ့မို့ စိတ်တက်ကြွပြီး ပြေးဖြစ်ပေမဲ့ ပွဲအပြီးမှာ … Continue reading →